Waxay u muuqataa in Apple aysan u baahnayn qof si uu u sameeyo Baabuurka Apple | Waxaan ka imid mac
Waqti ka waqti, wararka xanta ah ee ku saabsan Baabuurka Apple ayaa dib ugu soo laabta wararka qaar la xiriira oo soo baxay. Munaasabaddan, wararka xanta ah ee mar kale soo baxaya ayaa ku saabsan awoodda ay shirkaddu u leedahay inay abuurto Baabuurka Apple kaligeed. Adigoon u baahnayn wax soo saare gaar ah sida Hyundai, BMW ama Ford. Waxay u muuqataa in shirkadu waa isku filan tahay oo awood u leh hindisidda, naqshadaynta, soo -saarka iyo iibinta aaladdeeda ugu weyn uguna murugsan dhammaanteed.
Wararka xanta ah ee dhawaanahan soo ifbaxaya, waxay xaqiijinayaan in Apple uu aad uga tayo badan yahay inuu hindiso, soo saaro oo iibiyo mashruuciisa ugu halista badan. Baabuurka Apple. In kasta oo dhawaan aan aragnay luminta qof aad muhiim ugu ah mustaqbalka mashruucan, Duurka Dougwaxay umuuqataa taasi waxaa jira boqolaal injineero loo tababaray inay shaqada sii wadaan hab wax ku ool ah iyo damaanad qaadyo guul.
Sidaa darteed, sida lagu daabacay wargeyska Mail Economic Daily, Apple waxay si gaar ah u horumarinaysaa baabuurkeeda korontada iyada oo aan gacan ka helin baabuur -sameeye kale oo hadda dooranaya alaab -qeybiyeyaasha qaybaha ugu dambeeya. Tani waxay la jaanqaadaysaa warbixintii hore ee Reuters, oo sharxaysa in Apple ay leedahay qayb cilmi baaris iyo horumarin u gaar ah oo ku saabsan qalabka baabuurta ilaa 2014. Laakiin laba sano ka dib waxay diiradda saareen Software -ka, iyagoo ka tagay qaybtii jirka.
Si kastaba ha ahaatee. Maya helay shirkad awood u yeelatay inay buuxiso dalabyada iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee shirkadda American. Markaa ugu dambayntii, Apple waxay dooratay inay raacdo waddada oo u hoggaansanaato odhaahda ah: "Waan kariyaa, waan cunaa."
Apple ayaa hadda soo martay habka gudbinta Codsiga Macluumaadka (RFI). Codsiga Soo -jeedinta (RFP) iyo Codsiga Quotation (RFQ) ee soo -saareyaasha qaybaha baabuurta adduunka. Tan waxaa loo fahmay inay calaamad u tahay Apple waxay dooranaysaa shirkado si ay u soo saaraan wax soo saarka qaybaha lagama maarmaanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Waxay u muuqataa in Apple aysan u baahnayn qof si uu u sameeyo Baabuurka Apple
Waxay u muuqataa in dacwad tallaabo heer ah oo ka dhan ah Apple ay ku soo fool leedahay dildilaaca shaashadaha MacBook M1